Meleni Cottage Houses Grand Studio - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEleni
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uEleni iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwimeko ye-fairytale yaseParekklisia, i-Meleni Cottage Houses inikeza enye indlela emangalisayo kwiihotele zaseCyprus. Apha kule ndawo ibukekayo uya kuyo, unokufumana lonke umtsalane owunqwenelayo, kunye nokuzimela kunye nenkululeko yokwenza nantoni na oyifunayo. Lo mmandla usikelelwe ngobuhle obumangalisayo bentaba kunye nelali, kwaye apha ungonwabela ukukhwela ihashe, ukungcamla iwayini, ukukhwela intaba, ukuloba, ukuhamba ngesikhephe kunye nokukhwela ibhayisekile.
Isidlo sakusasa seyongezelelweyo i-euro ezili-12 ngomntu ngamnye (Iphuli yoLuntu)
Kwimeko ye-fairytale yaseParekklisia, i-Meleni Cottage Houses inikeza enye indlela emangalisayo kwiihotele zaseCyprus. Apha kule ndawo ibukekayo uya kuyo, unokufumana lonke umtsalane owunqwenelayo, kunye nokuzimela kunye nenkululeko yokwenza nantoni na oyifunayo. Lo mmandla usikelelwe ngobuhle obumangalisayo bentaba kunye nelali, kwaye apha ungonwabela ukukhwela ihashe, ukungcamla iwayini, ukukhwela intaba, ukuloba, ukuhamba ngesikhephe kunye nokukhwela ibhayisekile. Ezi zindlu zintle zeeholide zibonelela ngesiseko esigqibeleleyo sokuntywila kulonwabo lweCyprus efihliweyo.
Abasebenzi abanobubele nabakwamkelayo baya kuzama ukwenza iholide yakho ibe yeyokwenene ekhumbulekayo, kwaye kula maxabiso afikelelekayo uya kufumanisa ukuba le ndawo yenza utshintsho oluhlaziyayo kwiihotele ezixineneyo. KwiiNdlu zaseCottage injongo kukonwabela ubuhle bendalo obujikelezileyo kunye nezinto eziluncedo ozibonelelweyo kulonwabo lwakho.
Le propathi ye-rustic igubha umlingiswa ngophahla lwayo oluthambekileyo kunye neendonga zamatye, kwaye iindwendwe ziyakuxabisa iqula lokuqubha apho zingaphumla khona ngokukhululeka okumbalwa. Inkonzo yokuhlamba impahla kwindawo izisa uncedo olongezelelekileyo, ngakumbi ukuba uhamba nosapho lwakho, kwaye ukufikelela kwi-Intanethi ngaphandle kwamacingo kukugcina unxibelelana nabantu ababuyela ekhaya. Ukufumana amava angalibalekiyo kwisimo somlingo, iMeleni Cottage Houses ngokuqinisekileyo iya kuphumelela indawo entliziyweni yakho.
Ngena ngaphakathi kwaye ube namava eempawu zomlinganiswa oveziweyo wamatye, umhombiso ohonjisiweyo wegalari kunye ne-rustic archways. Awuyi kufumana indawo yokuya kwi-honeymoon yothando ngakumbi kunale!
Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela eline-en-suite ishawa / i-WC, i-air conditioning iyenza ibe yindawo efanelekileyo yokuhlala unyaka wonke. I-TV ibonelela ngokuzonwabisa okuncinci xa ufuna ikhefu elangeni. Ukudibanisa isazisi sayo esikhethekileyo ngexabiso elikhulu kunye nentuthuzelo, le ndawo ilufanele ngokupheleleyo udumo lwayo njengomnye womahluko.